एसएलसीमा कति ल्याउनेले कुन विषय पढ्न पाउने ? - Awajonline Online Newspaper
एसएलसीमा कति ल्याउनेले कुन विषय पढ्न पाउने ?
एसएलसीमा ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) २ ल्याएका विद्यार्थीले मात्रै विज्ञान समूहका विषय पढ्न पाउने भएका छन्।
११ मा पढ्न एसएलसीमा आठ विषयमध्ये अनिवार्य अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक, गणित, विज्ञानमा कम्तीमा डी प्लस ल्याउनै पर्ने हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ – अनिवार्य जनसंख्या तथा स्वास्थ्य र अरु दुई ऐच्छिक विषयमा भने डी र ई ल्याए पनि ११ मा पढ्न पाइन्छ।